लमजुङमा अबैध काठसहित दुईजना पक्राउ — donnews.com
'तीन दिनमा विभिन्न ठाउँमा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको चारसय ९५ क्युफिट अवैध काठ बरामद'
लमजुङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले अवैध रुपमा काठको तस्करी गर्नेहरुलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ । लमजुङ प्रहरीले तीन दिनमा विभिन्न ठाउँमा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको चारसय ९५ क्युफिट अवैध काठ बरामद गरेको हो ।
विशेष सूचनाका आधारमा माघ ६ गते लम्जुङको दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित खिमचोकबाट अवैध रुपमा काठको तस्करी हुँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले काठसहित दुईजनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।
अस्थायी प्रहरी पोष्ट किर्तिपुरबाट प्रहरी हवल्दार खिलबहादुर उपरकोटीको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले ग १ त ५४०६ नम्बरको ट्याक्टरमा अवैध रुपमा चाँपको ७४.८२ क्यु फिट काठ ल्याउँदै गर्दा ट्याक्टर चालकसहित संलग्न दुवैलाई पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले काठ तस्करीमा ट्याक्टर चालकसहित घटनामा संलग्न दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ८ बस्ने वर्ष ३६ का मेघराज घलेलाई पक्राउ गरी कारवाहीका लागि काठसहित डिभिजन वन कार्यालय लमजुङमा बुझाएको छ ।
त्यसैगरी, माघ ७ गते लमजुङ प्रहरीले दोर्दी गाउँपालिका वडा नं. ८ पाँचस्वारास्थित जंगलमा अवैध रुपमा लुकाई राखिएको चिरान गरेको काठ बरामद गरेको छ । प्रहरीले सो ठाउँमा चाँपको ३९६।९१ क्यु फिट काठ बरामद गरी वन कार्यालय लमजुङमा बुझाएको छ । प्रहरीका अनुसार अघिल्लो दिन काठसहित मानिस पक्राउ परे आफू पनि पक्राउ पर्ने त्रासका कारण उक्त स्थानमा चिरान काठ लगि छाडिएको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
त्यसैगरी, माघ ८ गते लमजुङ मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. ९ पिस्तीखोला क्षेत्रमा अवैध रुपमा सालको काठ ओसारपसार हुँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले २३.९१ क्युफिट सालको चिरान काठ बरामद गरेको हो । ईलाका प्रहरी कार्यालय भोर्लेटारबाट प्रहरी निरीक्षक बोधराज रेग्मीको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले वेवारिसे अवस्थामा २३.९१ क्यु फिट सालको चिरान काठ बरामद गर्न सफल भएको हो । ती बरामद गरिएका काठ आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि सव डिभिजन वन कार्यालय भोर्लेटारमा पठाइएको लमजुङ प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।